ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် အိမ်သုံးကုသမှု - Hello Sayarwon
ဦးနှောက်ထဲရှိ အာရုံကြောဆဲလ်အချို့တွင် ပြဿနာ တက်ပါက ပါကင်ဆန်ရောဂါ ဖြစ်ပွားသည်။ ပါကင်ဆန် ရောဂါသည်များသည် လှုပ်ရှားမှုတွင် အခက်အခဲဖြစ်သည်။ သင့်တွင် ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသည်ဟု သိရပါက အရမ်း စိတ်မပူပါနှင့်။ သင့်ကို သက်တမ်းစေ့ နေနိုင်စေသော အသုံးဝင်သော ကုသမှုများစွာ ရှိသည်။ အိမ်သုံးကုထုံးနှင့် လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းသည် ပါကင်ဆန်ရောဂါကို လွယ်ကူစွာနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်စွာ စားသုံးခြင်း။ ကျန်းမာသော အစားအသောက်များ စားခြင်းသည် ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏ လက္ခဏာ အချို့ကို သက်သာစေနိုင်သည်။ ဥပမာ- ဝမ်းချုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျှင်ဓါတ်များ၊ အရည်များ၊ omega3fatty acids ကဲ့သို့ အာဟာရများ ပါဝင်သော အစာများ သည် ဤရောဂါအတွက် သင့်တော်သည်။ အကြံပြုထောက်ခံ ထားသော အစာများမှာ သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ စပါး၊ ဂျုံစေ့များ၊ ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ ပဲသီး၊ ငါးနှင့် အဆီမပါ သော အသားတို့ဖြစ်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့် ခန္ဓါကိုယ်ကုထုံး။ ပါကင်ဆန် ရောဂါသည် သင်၏ မျှခြေကိုထိခိုက်စေပြီး လှုပ်ရှားရာတွင် အထူးသဖြင့် လမ်းလျှောက်ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်စေသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် သင်၏ မျှခြေကို တိုးတက်စေ သည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ ကခုန်ခြင်း၊ ရေကစား နည်းများ ကစားခြင်း၊ အကြောဆန့်ခြင်း စသော အားကစား နည်းများကို ကြိုးစားလုပ်သင့်သည်။
နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အိမ်ထောင် ပရိဘောဂများကို အလိုက်သင့် ပြင်ဆင်ခြင်း။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသူများသည် အဝတ်ဝတ်ခြင်း၊ စားခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းစသော ပုံမှန်နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုများတွင် အခက်အခဲများရှိသည်။ နေ့စဉ်ဘဝကို ပိုပြီးလွယ်ကူစေရန် နည်းလမ်းအချို့ပေးနိုင်သော အလုပ် အကိုင် ဆိုင်ရာ ကုထုံးဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။ လှုပ်ရှားသွားလာရန် လိုအပ်ပါက ထိန်းကိုင်နိုင်သော အားပြုနိုင်သော အရာများရှိအောင် သင့်အိမ်ရှိ ပရိဘောဂ အချို့ ကို နေရာပြန်လည် ချထားပါ။
စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသူများသည် ဝမ်းနည်း ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းကို ခံစားရလေ့ရှိသည်။ မိသားစုများ၊ သူငယ်ချင်းများထံမှ အကူအညီ အမြဲတမ်း တောင်းနိုင်ပါ သည်။ အခြေအနေပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန်ထံ သွားရောက် ပြသပြီး စောင့်ရှောက်မှုခံယူပါ။ ဥပမာ- စိတ်ရောဂါ ပညာရှင် နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အချို့ဆေးအမျိုးအစားများ သောက်ခြင်း
ရူးသွပ်ခြင်း။ ဤအခြေအနေသည် ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ဖြစ်ပွားပါသည်။ ရူးသွပ်ခြင်းသည် စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့် မှတ်ညဏ်များဆုံးရှုံးခြင်းကို ဖြစ်စေ သည်။ သင်သည် စိတ်ရှုပ်ထွေးနေပြီး ရှင်းလင်းစွာ မတွေးခေါ် နိုင်ပါက၊ အရာများကို မမှတ်မိပါက ဆရာဝန်ထံ တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်သွားပြပါ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါတွင် ဖြစ်သော ရူးသွပ်ခြင်းကို ဆေးများဖြင့် ကုသနိုင်သည်။
လှုပ်ရှားမှုပြဿနာများသည် ပါကင်ဆန်ရောဂါ ရှိသူများ ကို သက်တောင့်သက်သာနေထိုင်ခြင်းမှ တားဆီးသော အဓိက ပြဿနာဖြစ်သည်။
တုန်ရီခြင်းသည် အဖြစ်အများဆုံး ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ခန္ဓါကိုယ် ထိန်းချုပ်မှု ကောင်းအောင် လုပ်နေစဉ်တွင် လူနာသည် တုန်ရီခြင်းလျော့နည်း အောင် လက်များပေါ်တွင် အနည်းငယ် အားစိုက် နိုင်သည်။
ပါကင်ဆန်ရောဂါသည် စကားပြောနိုင်စွမ်းကို လည်း ထိခိုက်စေသည်။ စကားပြောနိုင်စွမ်း ကောင်းမွန် လာစေရန် လူနာသည် စကားပြော ကုထုံးဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဘာသာစကား ရောဂါဗေဒ ပညာရှင် ထံမှ အဆင့်မြင့်အကူအညီ ရယူသင့်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းအတွက် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသော ဆေးများ၊ လေ့ကျင့်ခန်း များက ကူညီနိုင်ပါသည်။
လူနာများသည် အထူးသဖြင့် ရောဂါ နောက်ပိုင်း အဆင့်များတွင် ချော်လဲခြင်း မဖြစ်အောင် ဂရုစိုက် ရမည်။ ခန္ဓါကိုယ်ကို နောက်လှည့်မည့်အစား ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့ခြင်း၊ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပေါ် တွင် ကိုယ်အလေးချိန်ကို မျှတူထားခြင်း တို့သည် အသုံးဝင်သော နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းတွင် ပါကင်ဆန်ရောဂါသည် ပြဿနာများစွာ ကို မဖြစ်စေပါ။ သို့သော် ရောဂါသည် အချိန်ကြာလာသည် နှင့်အမျှ ပိုပိုဆိုးလာသည်။ ဆေးသောက်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း အပြင် အိမ်သုံးကုထုံးသည် ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့် သက်တမ်းစေ့နေနိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
Parkinson’s Disease – Topic Overview. http://www.webmd.com/parkinsons-disease/tc/parkinsons-disease-topic-overview#1. Accessed April 26, 2017.
Parkinson’s Disease – Home Treatment. http://www.webmd.com/parkinsons-disease/tc/parkinsons-disease-home-treatment. Accessed April 26, 2017.
Lifestyle and home remedies. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/parkinsons-disease/basics/lifestyle-home-remedies/con-20028488. Accessed April 26, 2017.